Ivano Fossati ၏နှစ် ၇၀ သည်စိတ်မချရသော "ရှာဖွေသူ" • musanews
Keira Knightley တွင် Covid ရှိသည်။
ပင်မစာမျက်နှာ အသိုင်းအဝိုင်းခံစားပါ Ivano Fossati ၏နှစ် ၇၀ သည်စိတ်မချရသော "ရှာဖွေသူ"
စက်တင်ဘာလ ၂၁ ရက်နေ့တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြီးမြတ်ဆုံးတေးရေးဆရာတစ် ဦး သည်အသက် ၇၀ ပြည့်တော့မည်။ ငါတို့ဂီတမှာနာမည်ကြီးအနုပညာရှင်တစ်ယောက်ရဲ့ဇာတ်လမ်းကကျေးဇူးတင်ပါတယ်.
Ivano Fossati သမိုင်းဝင် Maritime Republic နိုင်ငံများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သော Genoa တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ Fossati တစ်ချိန်ကသတ်မှတ်ခဲ့သောချစ်သော Genoa အရိုးခံ၊ နည်းလမ်းကျသော၊ ကြမ်းတမ်းသည်မရ။ ဂျီနိုအာသည်အီတလီသီချင်းရေးဆရာ၏မြို့တော်၊ Fabrizio De AndréeLuigi Tenco၏ Gino PaolieUmberto Bindi၏ ဘရူနို LauziePaolo အဆက်Asti တွင်မွေးဖွားခဲ့သော်လည်း Genoese ကိုမွေးစားခြင်းဖြင့် Ivano Fossati သည်သူ၏မျက်လုံးများနှင့်သူ့နှလုံးသား၌ပင်လယ်ကိုချက်ချင်းရရှိခဲ့သည်။ မင်းစိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက်တွေနဲ့သာဘယ်နေရာကိုမဆိုရောက်နိုင်ဖို့ဘယ်ကုမ္ပဏီကိုမဆိုအိပ်မက်မက်ခွင့်ပေးနိုင်မယ့်အဆုံးမဲ့အာကာသ Ivano Fossati ၏ဇာတ်ကောင်ကိုကိုယ်စားပြုသောကြိယာသည်စူးစမ်းရန်ဖြစ်သည်.
သိရန်၊ နားလည်ရန်၊ ၎င်းတို့ကိုကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ရန်၊ ၎င်းတို့ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ သင်၏ကိုယ်ပိုင်သဘောသဘာဝနှင့်ခံစားလွယ်မှုတို့နှင့်အညီပုံသဏ္pingန်သစ်ဖြင့်ရှာဖွေခြင်း၊ ထို့နောက်သီချင်းအသစ်ဖန်တီးရန်စက္ကူကင်းစင်သောစာရွက်တစ်ရွက်ပေါ်တွင်ပစ်ချပါ။ သို့သော်လက်ရာသစ်တစ်ခုသည်အဆက်မပြတ်ဆက်လက်စူးစမ်းရန်အမြဲစိတ်မ ၀ င်စားပါ။
သား "ဒီနေရာကပင်လယ်ရှေ့”၊ ရာစုနှစ်အနည်းငယ်စောစောကအမည်ရှိအမျိုးသားတစ် ဦး ကိုလှုံ့ဆော်ပေးခဲ့သည် ခရစ်စတိုဖာကိုလံဘတ်စ် အမေရိကနံ့နံသောဝေးလံသောမြေများကိုစူးစမ်းရန် Ivano Fossati သည်သူ့ခေတ်လူငယ်များအားလုံးကဲ့သို့ရော့ခ်ဂီတ၌စွဲလန်းကြီးပြင်းလာခဲ့သည်။ Rolling Stones နှင့် အဲရစ် Claptonမရ။ သူသည်သူ၏ဂီတနှင့်ပိုမိုရင်းနှီးသော၊ အတွင်းကျကျကမ္ဘာသို့ ၀ င်ရောက်ရန်၎င်းမှတဖြည်းဖြည်းဝေးကွာသွားသည် အထိုင်များ အရှေ့အလယ်ပိုင်းအထိမြေထဲပင်လယ်အသံများနှင့်အတူဆိပ်ကမ်းများတွင်
ကျန်တာကတော့သူ့ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းနဲ့သူ့ရဲ့မယုံနိုင်စရာဂီတပါရမီကြောင့်ပါပဲ။ ဆယ့်ခြောက်နှစ်တွင်ကျောင်းမှထွက်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သောအခါဂီတ၏ခေါ်သံသည်ပြင်းထန်လွန်းပြီးနားမထောင်နိုင်တော့ပေ။ ပိုက်ဆံမရှိ၊ သူ့မှာဂစ်တာတစ်လုံးနှင့်ကစားလိုစိတ်ပြင်းပြသည်။ လေ့လာပါ၊ ကစားပါ၊ ထပ်လေ့လာပါ။ ဘက်စုံသုံးတူရိယာဆရာတစ် ဦး အနေနှင့်သူ၏အကျင့်သီလသည် ပို၍ ပို၍ ပေါ်လွင်လာသည်။ ကီးဘုတ်များ၊ ပြောင်းပြန်ပုလွေများ၊ ဂစ်တာများ၊ စန္ဒရားများသည်ယခုအခါသူ၏နည်းပညာနောက်ခံနှင့်သက်ဆိုင်သည်။
Ivano Fossati သည်သူကိုယ်တိုင်ရေးသားခဲ့သည်၊ သို့သော်သူသည်အခြားသူများအတွက်အများကြီးရေးခဲ့သည်။ သူ၏တစ်ကိုယ်တော်အနုပညာအလုပ်မစတင်မီအနည်းဆုံးဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအထိသူသည်အီတလီသီချင်းများစွာတွင်နာမည်ကြီးသီချင်းများရေးသားခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးစကြဝာသည်သူ့ကိုအပြစ်ကင်းစင်စွာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏အကြီးမြတ်ဆုံးသောဖျော်ဖြေတင်ဆက်သူများကအောင်မြင်စွာအနက်ဖွင့်ခဲ့သောသူ၏အမှတ်တံဆိပ်ကိုအောက်ခြေတွင်ရှိသည်။
Loredana Bertè - အဆောင်မှာ - ငါကမိန်းမတစ်ယောက်မဟုတ်ဘူး
Patty Pravo - အံ့သြဖွယ်အတွေး
အန်နာ Oxa - နည်းနည်းတော့မများဘူးပေါ့
မီယာ Martini - ပြီးတော့ကောင်းကင်ကမပြီးဆုံးသေးဘူး
Fiorella Mannoia - မေလရဲ့ညများo - ရေနွေးငွေ့ရထားများ
ပြီးတော့ပြန်တယ် Mina, Ornella Vanoni, အဲလစ်မရ။ ထူးခြားသောပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ Francesco De GregorieFabrizio De André.
Fabrizio De Andréနှင့်တွေ့ဆုံသည်
Ivano Fossati နှင့် Fabrizio De Andréတို့သည် Festivalbar အတွက် Genoa မှ Verona သို့ခေါ်ဆောင်မည့်ရထားပေါ်တွင်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ဖြစ်နိုင်သောအနာဂတ်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုဝဘ်ကိုယက်လုပ်ရန်စကားပြောခန်း။ ၁၉၉၀ လောက်မှာရထားပေါ်မှာအဲဒီ့တွေ့ဆုံမှုကနေဆယ့်ငါးနှစ်လောက်ကြာသွားပြီ။ ဒီအခွင့်အရေးကို De Andréအယ်လ်ဘမ်အသစ်ကပံ့ပိုးပေးခဲ့တယ်၊ တိမ်တွေGenoese တေးရေးဆရာနှစ် ဦး သည် Genoese စကားစုတွင်သီချင်းနှစ်ပုဒ်၏စာသားများကိုရေးခဲ့သည်။ MéguMegùneအိုမာအတွက်.
ဤအကျဉ်းချုပ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသည်အီတလီတေးရေးသမိုင်းတွင်အလွန်ထူးကဲသောကဗျာဆန်ဆန်အယ်လ်ဘမ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်ရန်သာမက၊ မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆိုအမြဲပြုလုပ်ခဲ့သောအလုပ်တစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ ရ၊ တင်းမာပြီးဆန့်ကျင်ဘက် ဦး တည်နေသည်၊ တွေ့သမျှစကားလုံးတွေကိုငှားတယ် အကန့်အသတ်မဲ့ဆုတောင်းခြင်းမရ။ ငါတို့က ၁၉၉၆ မှာနှစ်ယောက်ပြန်ဆုံပြီးမလွယ်ကူတဲ့လမ်းကြောင်းကိုစခဲ့တယ်။ လက်လေးဖက်လုံးကိုရေးပါပု နောက်ပိုင်းမှာ Ivano Fossati ကရေးလိမ့်မယ်။ "စာရေးနေစဉ်တွင်ကဗျာဆန်ဆန်သုံးသည်၊ သို့သော်တစ်ယောက်ကစကားလုံးများရှာဖွေရန်ကြိုးပမ်းမှုကိုသတိမပြုမိပါ။ Fabrizio De Andrèနဲ့ငါကြုံခဲ့သလိုပဲ၊ မင်းကမင်းဘာလုပ်နေလဲဆိုတာကိုမင်းသဘောပေါက်တယ်၊ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ကြည့်တယ်၊ မင်းစိတ်ကူးတွေကိုနှိုင်းယှဉ်တယ် ".
Souls မင်္ဂလာပါ ၎င်းသည် ၁၉၉၉ ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ ၁၁ ရက်တွင်သေဆုံးမည့် Fabrizio De André၏နောက်ဆုံးလက်ရာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သူ၏ဆန္ဒနှင့် Ivano Fossati ၌ထူးခြားသောအဖော်ဖြစ်သည်ကိုမသိဘဲ၊ သူ၏ဆန္ဒနှင့်သူ၏နောက်ဆုံးအနုပညာခရီးအတွက် Faberizio De André၏နောက်ဆုံးလက်ရာဖြစ်သည်။ ၁၉၉၆ ခုနှစ်စက်တင်ဘာ ၁၉ ရက်တွင်လွန်ခဲ့သော ၂၅ နှစ်ကဖြန့်ချိခဲ့သည်, Souls မင်္ဂလာပါ ဒီဇိုင်းအဖြစ်၊ စီစဉ်ပြီးတည်ဆောက်ခဲ့သည် အယူအဆအယ်လ်ဘမ်သီချင်းများအားလုံးကိုအလွန်ပါးလွှာသော်လည်းထင်ရှားသောချည်ဖြင့်ချိတ်ဆက်ထားသောအော်ပရာတစ်ခုကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ Salve Souls များသည်ကွဲပြားခြားနားသော၊ ထာဝရ "လူနည်းစု"၊ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းဟုခေါ်သောအစွန်းများနှင့် "ပုံမှန်" မှခွဲခွာနေထိုင်သောသူများဖြစ်သည်။
ဒါကြောင့်အဲဒါကိုပြောတာပါ Princesaနောက်ဆုံးမှာလိင်တူဆက်ဆံသူတစ် ဦး ရဲ့ဘဝ "မီလန်ရှေ့နေ“ ၎င်းသည်၎င်းအားရောမလူမျိုးများမှဖယ်ထုတ်လိုက်သောအရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းကိုကိုယ်စားပြုသည် Khorakhanéမရ။ သီချင်းနှစ်ပုဒ်သည်မလိုမုန်းထားမှုနှင့်မှားယွင်းသောအကျင့်စာရိတ္တကိုဆန့်ကျင်သောအစာအိမ်ကိုထိုးဖောက်သောသီချင်းနှစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်။ အဖျက်အဆီးeအကန့်အသတ်မဲ့ဆုတောင်းခြင်း ၎င်းတို့သည်မည်သည့်မှတ်ချက်မျှမလိုအပ်ပါ၊ ၎င်းတို့သည် De André၏စကားများနှင့် Fossati တေးဂီတ၏မှော်ပေါင်းစပ်မှုကိုဖန်တီးရန်စီမံထားသောလက်ရာနှစ်ခုသာဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ရှိသေးတယ် Souls မင်္ဂလာပါအော်ပရာ၏ထင်ရှားသောသီချင်း။ De Andréနှင့် Fossati တို့ကအသံနှစ်ခုဖြင့်သီဆိုသည်၊ ယခုတစ်ပုဒ်၊ ယခုတစ်ပုဒ်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုသည်အလွန်ပြင်းထန်သည်၊ အကြောင်းအရာကိုဖျက်စီးသည်။
Ivano Fossati ၏ Discography
DELIRIUM ရေချို (Fonit၊ ၁၉၇၁)
ငါတို့ကျော်ဖြတ်ရမယ့်ပင်လယ်ကြီး (Fonit၊ ၁၉၇၁)
မိုးမလင်းခင်လေးမှာဘဲ (Fonit၊ ၁၉၇၁)
Indiana ကိုနှုတ်ဆက်ပါတယ် (Fonit Cetra၊ ၁၉၇၅)
မြွေ၏အိမ် (RCA၊ ၁၉၇၇)
ငါ့တီးဝိုင်းကရော့ခ်တီးတယ် (RCA၊ ၁၉၇၇)
ပနားမားနှင့်ပတ်ဝန်းကျင် (RCA၊ ၁၉၇၇)
နယ်ခြားမြို့များ (CBS၊ ၁၉၈၃)
Ventilazione ဆေး (CBS၊ ၁၉၈၃)
၅ ရက် (CBS၊ ၁၉၈၃)
လက်ဖက်ပင် (CBS၊ ၁၉၈၃)
Descant ဖြစ်သည် (Epic, ၁၉၉၀)
Lindbergh (Epic, ၁၉၉၀)
အချိန်ကောင်း (တိုက်ရိုက်၊ Epic၊ ၁၉၉၃)
ကဒ်များကို decipher လုပ်ရန် (တိုက်ရိုက်၊ Epic၊ ၁၉၉၃)
နွားလား (တေးသံ၊ Epic၊ ၁၉၉၃)
Macrame (ကိုလံဘီယာ၊ ၁၉၉၆)
အချိန်နှင့်တိတ်ဆိတ်ခြင်း၊ စုဆောင်းရန်သီချင်းများ (မနုဿဗေဒ၊ ၁၉၉၈)
ပြည်သူတွေရဲ့ဆုံးမပဲ့ပြင်မှု (ကိုလံဘီယာ၊ ၁၉၉၆)
စကားတစ်လုံးမှမပါဘူး (ဆိုနီတေးဂီတ၊ ၂၀၀၁)
လျှပ်စီးလက်ခရီးသွား (ဆိုနီတေးဂီတ၊ ၂၀၀၁)
အတွဲ ၃ တိုက်ရိုက်အသံလွှင့်ဖျော်ဖြေပွဲ (တိုက်ရိုက်၊ Sony Music၊ ၂၀၀၄)
ကောင်းကင်တမန်မင်း (ဆိုနီတေးဂီတ၊ ၂၀၀၁)
လမ်းတစ်ခုကိုငါအိပ်မက်မက်ခဲ့တယ် သုံးဆူစီဒီ၊ သမိုင်း၊ Sony တေးဂီတ၊ ၂၀၀၆)
ခေတ်ပေါ်တေးဂီတ (Emi၊ 2008)
သရုပ်ဖော်ပုံ (Emi၊ 2011)
Mina Fossati (ဆိုနီ၊ 2019)
Ivano Fossati ၏အတွေး
“ ငါတို့ကဂီတရဲ့ဗဟိုချက်ကနေမိုဘိုင်းဖုန်းတွေအတွက်လောင်စာဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုပြောင်းသွားတယ်။ ငါတို့ကအကြောင်းအရာတွေကိုဂရုတစိုက်နားထောင်တယ်၊ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဆွေးနွေးတာ၊ အိပ်မက်မက်တာဒါမှမဟုတ်အကြောင်းပြချက်ယူတာတို့လုပ်ခဲ့တယ်။ စာအုပ်တစ်အုပ်ဖတ်နေရသလိုပဲ။ စာပေသို့မဟုတ်ဂီတ၌ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှစ်မြှုပ်ခြင်းနှင့်ခြားနားခြင်းမရှိချေ"။
ယခင်ဆောင်းပါးငါတို့ဘာကြောင့် - အခြားသူတွေရဲ့သဘောထားကိုမပြောင်းလဲနိုင်တာလဲ။
နောက်ဆောင်းပါး၂၀၂၁ ခုနှစ် Emmy Awards ဆုရရှိသူများစာရင်း
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည် Stefano Vori ဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်သည် စာရေးခြင်းအား မရပ်တန့်နိုင်သော ဝါသနာ အမြဲရှိခဲ့ပါသည်။ Musa News ၏ ကျေးဇူးကြောင့် ကျွန်ုပ်သည် ကျွန်ုပ်၏ ပို့စ်များမှတဆင့် ကျွန်ုပ်၏ အခြားသော ဝါသနာအားလုံးကို သင့်အား မိတ်ဆက်ပေးခွင့်ရခဲ့ပါသည်။ ခင်မင်ရင်းနှီးစွာ နှုတ်ခွန်းဆက်သပြီး ဒီစာမျက်နှာမှာ မကြာခင် ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့။
HAIRSTYLE 2018: အနီရောင်ဆောင်း ဦး ရာသီ
Paolo Rossi, ထာဝရကလေး
ဒီဇင်ဘာလ 10, 2020
နိုဝင်ဘာ 11, 2017